Duqa Muqdisho” Been ma ahan Coronovirus, dhab haloo qaato qatartiisa” – Bandhiga
Home dhab haloo qaato qatartiisa”
Duqa Muqdisho” Been ma ahan Coronovirus, dhab haloo qaato qatartiisa”
in dhab haloo qaato qatartiisa”
Duqa Magaalada ahna Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) ayaa ka digay Faafitaanka Xanuunka dhibaatada ku haya guud ahaan Caalamka ee Coronavirus.
Finish sheegay in Cudurka uu soo gaarey Soomaaliya,isla markaana ay u dhinteen dad uu yaqaano,kuwaas oo aan dibadda ka imaan sida uu wariyayaasha u sheegay Khamiis maanta ah.
Guddoomiye Cumar Filish ayaa sheegay in Cudurka Conavirus uu yahay mid halis ah oo si fudu la isku qaadsiin karo,balse shacabku ay yihiin kuwo qaba feejignaa xoogan,kuwaas oo sheegaya in aan waxba ka jirin sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaan ugu baaqayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee Muqdisho kunool in ay xoojiyaan ka hortaga cudurka Covid-19 oo dhibaata adag kuhaya nolasha iyo horumarka Caalamka,dad aan aqaano oo aan dibada ka imaan ayaa dalka gudihiisa ugu dhintey Cudurka oo la Aasay kuwana uu weli haayo ayuu yiri”Cumar Filish ayaa sidaasi u sheegay.
Cumar Finish ayaa soo jeediyay in la qaato talooyinka Caafimaadka ee Warbaahinta iyo Saraakiisha Caafimaadka bixiyaan si looga hortaga Xanuunka oo la saadaalinayo in bish 5 aad ee Sanadkaan uu ku faafi karo wadamada dhaca geeska Afrika.
“Talooyinka Caafimaadka ee ay bixinayaan dhaqaatiirto iyo warbaahinta waa in sidooda loo qaato” ayuu la wadaagay warfidiyeenka.
Waxaa jira sheeko isdaba joog ah bulshada dhexdeeda oo ah in ‘Covid-19’ uu yahay mid laga beensheegayo oo ay ka dambeeyaan siyaasiyiin si lacag looga uruursadaan deeq-bixiyeyaasha ama in cudurka uusan ku dhicin ama uusan dilin dadka Muslimiinta ah taas oo caqabad ku ah ka hortaga Xanuun.
Gudoomiyaha ayaa soo hadal qaaday hadal haynta bulshada qaakood,ayaa shaaca ka qaaday in arintaasi tahay dacaayad iyo been abuur sida uu hadalka u dhigay.
“In aad tiraahdaan waa been, waxba kama jriraan taasi waa niyad jab,waa dhab waa jirtaa, majirto waxaan been inkaga sabanayo” ayuu u sheegay warbaahinta.
Hadalka guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa kusoo aaday xilli shalay la xaqiijiyey in qofkii ugu horeeyey Muqdisho uu Cudurka Coronavius ugu geeriyoodey.
Gudoomiyaha ayaa hadalkaan ka sheegay maanta munaasabad lagu dhagax dhigay wajigii 3-xaad ee dhismaha wadada Janaraal Daa’uud oo dhaxmarta Degmooyinka Boondheere iyo Warta Nabada gaar ahaan wadada isku xirta Isgooska Boondheere iyo isgooska Siinaay ee Magaaladda Muqdisho.